Nickel Waya ntupu, Gbasaa Metal waya ntupu, welded waya ntupu - Ansheng
Anyị ụlọ ọrụ bụ ihe enterprise ọkachamara na mmepụta na ire nke dị iche iche metal waya ntupu na iyo akụrụngwa. A na-eji ngwaahịa ndị a eme ihe na ígwè ọrụ, petrochemical, plastic, metallurgy, pharmaceutical, water treatment and other works. Companylọ ọrụ anyị enweela mmepụta na ule nyocha, njikwa sayensị siri ike na njikwa mma. Mgbe ihe karịrị afọ 20 nke mmepe, ọ na-a nke oge a na enterprise tụnyere R & D, imewe, mmepụta, ahịa, na ọrụ. Na mgbakwunye na afọ ojuju ụlọ ahịa, anyị na ngwaahịa Ọzọkwa exported na United States, Brazil, Germany, Poland, Australia, New Zealand, Taiwan na mba ndị ọzọ na mpaghara.
IHE OMUME & EGOSI AKA